Nnwom 63 NA-TWI - Onyankopɔn ho anigyina - O - Bible Gateway
Nnwom 62Nnwom 64
Nnwom 63 Nkwa Asem (NA-TWI)
63 O Onyankopɔn, woyɛ me Nyankopɔn na m’ani agyina wo. Me nipadua nyinaa hwehwɛ wo te sɛ asase a ɛso awo na srade ne nsu nni mu. Wo ho sukɔn de me kra. 2 Ma minhu wo wɔ Kronkron mu Kronkron hɔ; ma minhu sɛ woyɛ ɔkɛse ne onuonyamfo. 3 Wo dɔ a wodɔ daa no ye sen nkwa ankasa mpo, enti mɛkamfo wo. 4 Sɛ mete ase yi, mɛda wo ase. Mɛma me nsa so abɔ wo mpae. 5 Me kra bedidi na amee na mɛto anigye nnwom ayi wo ayɛ.